हार्ट अट्याक कार्डियक एरेस्ट हार्ट फेलियरमा के भिन्नता छ ? मुटु कसरी स्वस्थ राख्ने ?
शुक्रबार, ५ असोज, २०७५
हार्ट फेलियरको बारेमा आमधारणा यो छ कि यसमा मुटुले एकैचोटी काम गर्न छोड्छ तर यो पुर्णरुपमा साँचो हैन । हार्ट फेलियर भएमा मुटुको रगत पम्प गर्ने क्षमता कमजोर हँदै जान्छ ।
अथवा यसले बिरामीको तत्कालै मृत्यु त हँदैन् तर उसको जिन्दगीमा खतरा बढ्छ । यस्तोमा समय छदँै सम्हालिने जरुरी हुन्छ । यसको लागि हरेक ब्यक्तिलाइ हार्ट फेलियरको संकेत जान्नु जरुरी छ ।
डाक्टरहरुकाअनुसार धेरैजसो केसमा हार्ट फेलियरको संकेट १५ दिन या यसभन्दापनिपहिले देखिन थाल्छ । यदि समयमै यसलाई पहिचान गरेर उपचार सुरु गर्ने भने यसले जिन्दगीमाआउन सक्ने सम्भावित खतराबाट बचाँउछ ।
हार्ट अट्याक तब हुन्छ जब मुटुको धमनी ब्लक हुनाले रगत मुटुसम्म पुग्न पाँउदैन । तर ब्लकेज धेरै भयो वा समयमै यसको ब्लकेज हटाइएन भने मुटुले काम गर्न छोड्छ र बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्छ ।
जब मुटु धड्किन बन्द गर्छ तब यसलाई कार्डियक एरेस्ट भनिन्छ । मुटुको धड्कनको लागि एक इलेक्ट्रिकल तरंग जो जिम्मेवार हुन्छ । जब यो तरंग रोकिन्छ तब मुटु पनि धड्किन बन्द हुन्छ । यसले बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्छ ।
यसमा मुटुको पम्प गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । यसले बिरामीको तुरुन्त मृत्यु भइ हाल्दैन तर समय बाँकि छँदै उपचारको जरुरी हुन्छ । लापरबाही गरेमा यो घातक हुन सक्छ ।
हार्ट फेलियरको संकेत के के हुन त ?
बिना कारण थकाइ
हार्ट फेलियर हुनाले ब्लडमा अक्सिजनको कमी हुन थाल्छ र यस्तोमा बिनाकारण थकाइ र कमजोरी महसुस हुन्छ ।
मुटुको धड्कन बढ्ने
मुटुमा रगतको पर्याप्त सप्लाइ नहुनाले मुटुको धड्कन बढ्न थाल्छ ।
मुटुले सही तरिकाले रगत पम्प गर्न नसकेमा मश्तिष्कसम्म सही तरिकाले रगत सप्लाइ हुन सक्दैन् । यस्तोमा मश्तिष्कले भोक लागेको संकेत दिन पाँउदैन ।
अनुहार र खुट्टा सुन्निने
शरिरमा सही तरिकाले रगत सप्लाई नहुनाले अनुहार र खुट्टा सुन्निन थाल्छ ।
सास फेर्न समस्याहुने
शरिरमा रगतको सर्कुलेसन बिग्रनाले फोक्सोमा पानी भरिन थाल्छ । यस्तोमा सास फेर्नमा गाह्रो हुन्छ ।
फोक्सोमा पानी भरिनाले खोकीको समस्या देखिइरहन्छ । यो हार्ट फेलियरको संकेत हुन सक्छ ।
वजन कम गर्ने
तनाव कम गर्ने
नियमित शारीरिक अभ्यास गर्ने
ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्ने
डायबिटिज नियन्त्रण गर्ने
राम्रो सँग निदाउने